काठमाडौंकाे प्रदूषित वायुले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ? डा अर्जुन कार्कीसँग भिडियो वार्ता :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
काठमाडौंकाे प्रदूषित वायुले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ? डा अर्जुन कार्कीसँग भिडियो वार्ता
रिता लम्साल बुधबार, चैत १८, २०७७, १२:२५:४६
काठमाडौं– केहीदिन यता काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण निकै बढेको छ। अत्याधिक वायु प्रदूषण रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय शुक्रबारसम्मका लागि बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि घरबाहिर सकेसम्म ननिस्कन र निस्कनै पर्दा विशेष सावधानी अपनाउन सचेत गराएको छ।
वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा अर्जुन कार्कीले स्वास्थ्यखबरसँग कुराकानी गर्दै हाल काठमाडौं उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पारिरहेको बताएका छन्।
वायु प्रदूषणले मानिसहरुमा आँखाहरु पोल्ने, चिलाउने, नाक चिलाउने, नाक पोल्ने हाँच्छिउ आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी खसखसाउने लगायतका तत्कालिन असरहरु देखिने उनको भनाइ छ।
प्रदूषित वातावरणमा लामो समयसम्म रहदा दम, मुटु सम्बन्धि रोग, फोक्सोको क्यान्सर हुने, पक्षघात हुने, मानिसहरुमा बिर्सिने रोग लाग्न सक्ने डा कार्कीले बताए।
यस्तै दीर्घरोगका बिरामीहरुमा समस्या झनै बढ्दै जाने र अस्पतालमै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने र गर्भवती महिलाको गर्भमा रहेको शिशुमा समेत असर पर्ने उनले बताए।
डा कार्कीका अनुसार स्वस्थ हावापानीमा हुर्किएका बालबालिकाको तुलनामा प्रदूषित हावाको सम्पर्कमा लामो समयसम्म बसेका बालबालिकामा मस्तिष्कको विकासमा पनि नकारात्मक असर गर्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनहरुबाट पनि पुष्टि भएको छ।
वायु प्रदूषणलाई कम गर्न तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा गर्नसक्ने उपायहरु अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै वायु प्रदूषण कम गराउन राज्य र नागरिकको फरक–फरक दायीत्व हुने डा कार्कीको तर्क छ।
व्यक्तिले अनावश्यक रुपमा प्रदूषित वातावरण जान नहुने, व्यक्तिगत रुपमा हुने वायु प्रदूषणको कारक तत्वहरुलाई कम गराउने गर्नुपर्ने र धुम्रपान गर्न नहुने उनले बताए।
उनले भने, ‘प्रदूषित वातावरणमा पनि हिड्ने र धुम्रपान पनि गर्ने व्यक्तिहरुमा दोहोरो असर गर्छ, झन् बढी नोक्सान हुन्छ, त्यसैले चुरोट खानु हुँदैन।’
राज्यले धुवाँ फाल्ने खालका पुराना गाडीहरुलाई निगरानी गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र ठूला–ठूला कलकारखाना तथा इट्टाभट्टाबाट निस्किने धुवाँलाई कम गराउन सरकारले विशेष नीति बनाएर सो नीतिलाई कार्यन्वय गर्नुपर्ने डा कार्कीको भनाइ छ।
अहिलेको प्रदूषित वातावरणमा निस्कनै पर्ने अवस्थामा मास्क लगाउनुपर्ने र सम्भव भएसम्म एन९५ मास्कको प्रयोग गर्न डा कार्कीको सुझाव छ।
स्वाच्छ वायु लिन पाउनु नागरिकको अधिकार भएको संविधानमै उल्लेख भएको र सरकारले विभिन्न नीतिनियमहरु बनाएपछि ती नियमहरु कार्यन्वयमा सरकार आफै चुकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले बनाएको नीति नियम र निर्देशिकाहरु कार्यन्वयको पक्ष फितलो भएकाले पनि वायुप्रदूषणको मात्रा कम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
वायु प्रदूषण हुने कारणहरु के–के हुन् ? वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्ने तत्कालिन र दीर्घकालिन असरहरु केके छन् ? प्रदूषित वायुले हाम्रो शरीरका भित्री अंगलाई कसरी असर गर्छ ? वायु प्रदुषणले कस्ता व्यक्तिहरुलाई बढी असर गर्छ ? प्रदूषित वायुमा बाहिर निस्किनै पर्दा के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ ? वायु प्रदुषणलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले दीर्घकालिन रुपमा कस्ता योजनाहरु बनाउनुपर्छ ? कस्ता नीति लागु गर्नुपर्छ ? लगायतका विषयमा डा कार्कीसँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले भिडियो कुराकानी गरेकी छिन्।
हेरौं डा कार्कीसँगको भिडियो संवाद
भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितकाे चाप बढ्दै २३ मिनेट पहिले
शनिबार काठमाडौंमा ४६ हजारले लगाए भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा ५२ मिनेट पहिले